Ukucaciswa okuphambili kweNokia 8.1 kuvela kwiGeekbench | I-Androidsis
Ukulandela ulwaziso lwamva nje lwe Nokia 3.1 Plus kunye INokia 7.1 Plus (X7), uphawu lwaseFinland lubonakala ngathi lulungiselela i-smartphone entsha, ekungekho enye ngaphandle kwe Nokia 8.1, iselfowuni esiya kuthetha nayo ngezantsi.
Ngaphambili, Nokia 8 yasungulwa kunyaka ophelileyo njengefowuni yokuqala yeNokia kulandela ukufunyanwa kwegama yiHMD Global. Isixhobo sifumene uphononongo olulungileyo nolubi, kunye nezikhalazo ezininzi malunga nezinye izinto ezingekhoyo, ezinje ngesikrini se-AMOLED, kubathengi abakhethiweyo. Ewe, inkampani inokusihlaziya esi sixhobo ngeNokia 8.1, eya kuthi thaca kungekudala ngenxa yayo I-foray yamva nje eGeekbench.
Kwangoko kulo nyaka INokia 8 Sirocco iprosesa efanayo kodwa kuyilo olutsha, isikrini esingcono, kunye nebhetri enkulu kuneNokia 8. Ngoku, kungene umntu oza kungena ezihlangwini zeGeekbench enendawo enye yedesimali kwinombolo yayo, 8.1, kwaye kubonakala ngathi ayizukuba kwiflegi.
INokia 8.1 yavavanywa yibenchmark kwaye indawo iveza ezinye zeenkcukacha zayo. Ukuba ubulindele i-Snapdragon 845 kuyo, kungafuneka ulinde iNokia 9 okanye iNokia 8.1 Plus, ukuba kuyakubakho iselfowuni, ukusukela INokia 8.1 isebenza kunye Snapdragon 710, Enye yeeprosesa zefowuni zamva nje kwintengiso. Kwangelo xesha, le chipset ephezulu ye-midrange ibhangqiwe nge-4GB ye-RAM.
UGeekbench ukwatyhila oko ifowuni iqhuba iPie ye-Android 9.0 njengenkqubo yokusebenza. Ukongeza koku, ikwachaza ukuba ifumene amanqaku ayi-1.841 kuvavanyo olusisiseko kunye namanqaku angama-5.807 kuvavanyo olungqongqo.
Eli lixesha lokuqala nantoni na ikhonkrithi ivele kubukho beNokia 8.1, ke kusekho okuninzi ekufuneka ujonge kuko. Ngethemba, Iinkcukacha ezithe kratya ziya kuvela kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Nokia 8.1 iyeza: izinto eziphambili ezichazwe nguGeekbench